मिस वर्ल्डको उपाधि जित्न अब श्रृंखलाले के गर्नुपर्छ ? यसरी हुँदैछ विश्व सुन्दरीको चयन - www.dthreeonline.com
मिस वर्ल्डको उपाधि जित्न अब श्रृंखलाले के गर्नुपर्छ ? यसरी हुँदैछ विश्व सुन्दरीको चयन
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १९, २०७५ समय: १०:१०:२४
काठमाडौं/ चीनमा विश्व सुन्दरी २०१८ चयनका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सो प्रतिस्पर्धामा नेपालबाट मिस नेपाल २०१८ श्रृंखला खतिवडा पनि सहभागी भएकी छन् । हेड टू हेडको दोस्रो चरणमा पराजित भएका नेपालीलाई खुसी र आशाको सञ्चार गराउँदै सोमबार श्रृंखलाले मल्टिमिडया अवार्ड र ब्युटी विथ पर्पस जितेकी छन् ।
यो जितसँगै उनी विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको अन्तिम ३० मा पुग्न सफल भएकी छन् । मिस वर्ल्डकोे ताज चुम्न श्रृंखला धेरै टाढा छैनन्, तर चुनौतीको सामना गर्न मिहेनतको भने निकै खाँचो छ । अब मतको होइन, उनको व्यक्तिगत अभिमत मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
साथै सुुन्दरी प्रतियोगितामा अन्तिम १५ र अन्तिम ५ सहित विश्व सुन्दरीको ताजसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अब अन्तिम ३० को अन्तिम लिस्ट तयार भएपछि विभिन्न समूहमा विभाजित गरी आयोजकले अन्तिम १५ को छनौट गर्छ । श्रृंखलाले अन्तिम १५ का लागि मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सो अन्तिम १५ का प्रतियोगीबाट अन्तिम ५ छनौट भई तिनैबाट मिस वर्ल्डको घोषणा हुनेछ ।